SWMC T45-TH DILLING RIG IRI KUSHANDA PALIMESTONE QUARRY YEKUCHINJWA DISTRICT YEBEIJING |
QUY25 Yakateverwa Crane
SWMC T45-TH DILLING RIG IRI KUSHANDA PALIMESTONE QUARRY YEKUCHINJA DISTRICT YEBEIJING.
Fengshan Mine, iri muChangping District, Beijing, ndiyo yakavakirwa marambi ezvigadzirwa zveBeijing Cement Works Co., Ltd., yakaverengerwa se "National Green Mine Pilot Unit" neBazi reNyika nezviwanikwa muna 2011 uye imwe. emabhizinesi ekutanga esimende kupasisa ongororo yemugodhi wegirinhi wenyika muna 2016.
Kwemakore, Fengshan Mine yanga ichitsvaga kugadzirwa kwakachena, manejimendi akamisikidzwa, maererano nesainzi nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza sekusimudzira kwayo.Fengshan Mine igomba rakashama. Kuti zvizadzise zviyero zvekuburitsa huruva, midziyo yekubvisa huruva inofanira kuiswa panzvimbo dzese dzeguruva panguva yekuvakwa.SWMC-T45 hydraulic open-air top sando chibooreso chine chamupupuri uye laminar kuyerera-matanho maviri ekubvisa guruva mudziyo wakashandiswa muFengshan Mine kuchera. gomba rinoputika.Iyo nzira yekubvisa guruva yemuenzaniso uyu inogona kusefa kusvika ku 15 square metres, iyo inogona kunyatsosefa guruva uye kuderedza zvakanyanya kukanganisa kweguruva pane zvakatipoteredza.
Shenwar -T45 hydraulic top hammer drill muchina ndeimwe yemichina yakasanganiswa yekuchera yakagadziridzwa naShenwar mumakore achangopfuura.Inotora chiJapan chine mukurumbira brand Yamamoto's rock drill YH-100, simba rekuita redombo drill i20.6KW, iyo frequency frequency ndiyo yakakwira zvekusvika 2500BPM, iyo compressor inoshandisa pasirese ine mukurumbira screw compressor zvigadzirwa zveSullian-Palatek kuti ive nechokwadi chakaringana chekugeza gasi, kubuda mushe kwemarara ematombo.
Nekushandiswa kwakaderera kwemafuta uye kushanda nesimba kwekufambisa kwepamusoro zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekuchera, iyo Shenwart-T45 yakazara hydraulic yepamusoro sando yekudhirowa isarudzo yakanaka kwazvo yekuvaka nekuchera matombo.
Iyo Shenwart-T45 rig yakashongedzerwa nemberi inorerekera cab ine yekudziya yemukati uye inotonhodza mhepo inofefetera. Ruzha rwemukati rwusingasviki 85dB, inopa nzvimbo yekushanda yakasununguka kune anoshanda, nekudaro inovandudza kushanda zvakanaka nekuchengetedza kuchengetedzwa kweanoshanda.Iyo yakasarudzika-ku-control drilling system yakasarudzika inogona kugadzirisa otomatiki kumhanya, kusunda kumanikidza, kutendeuka. torque uye kukanganisa kudzvinyirira maererano nedombo mamiriro kuti uwane yakanakisa kushanda state.Panguva imwe chete, ine mechanical tsvimbo yekuchinja system iri nyore uye yakavimbika kupfuura iyo hydraulic mota rod shanduko system.
Kunyange michina yakanakisisa inoda kuchengetedzwa kwemaitiro kuti irambe iri mumamiriro ekushanda epamusoro.Zvikamu zvechokwadi zveSWMC uye vashandi vebasa rakazara mushure mekutengesa kuti vakupei huwandu hwakazara hwekudzivirira.SWMC's targeted preventive maintenance, drill maintenance, kugara uchiongorora, kugadzirisa nguva dzose, vashandi. pa-saiti sevhisi uye mamwe mapurojekiti anovimbisa yakaderera kutadza mwero wekuchera RIGS, nepazvinobvira kupfupisa nguva yekudzikira.
Customized tekinoroji retrofits uye remanufacturing mashandiro anodzoreredza midziyo yepakutanga kumamiriro epamusoro ekushanda uye kushanda nesimba, uku ichiita kuti michina ive yakachengeteka, ichiita zvirinani uye kushomeka kwezvakatipoteredza.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-01-2021